ဖောက်သည် - Feinade လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာ Co. , Ltd မှ
Zhuhai pinot နည်းပညာတွဲဖက်။ , LTD
အစဉ်မပြတ်ငါနှစ်ပေါင်းများစွာယျတျောနှငျ့အတူမိတ်ဆွေများကိုပါပြီ, ငါသူ Times သတင်းစာနှင့်အတူအရှိန်အဟုန်စောင့်သောသူတစ်ဦး, အတွေ့အကြုံရှိယဉ်ကျေးများနှင့်နှိမ့်ချခေါင်းဆောင်ကြောင်းယုံကြည်ကြသောကြောင့်သူ့ကိုငါနှင့်အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်ဒီတော့ယုံကြည်မှုဖြစ်ကြောင်းကိုရတဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာဖွံ့ဖြိုးဆဲဖြစ်နေပါတယ်။ ငါကောင်းသောဂုဏ်သတင်းနှင့်အတူထုတ်ကုန်များ၏ထိုကဲ့သို့သောစီးရီးနဲ့အတူဒွန်တွဲအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ခေါင်းဆောင်၏ခေါင်းဆောင်မှုအောက်မှာ feynard ဧကန်အမှန်အပိုမြန်ခြင်းနှင့်ပိုရှည်သွားလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ ငါသည်လည်းပိုပြီးဧကရာဇ်သည်သူ၏အလိုတော်ကိုမှတက်အသက်ရှင်တော်မူသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။
Zhuhai pinot နည်းပညာတွဲဖက်။ , LTD မှ။ - တောင်ဘက်တရုတ်ဒါရိုက်တာ - Ren Guoqiang
Zhuhai pinuo နည်းပညာတွဲဖက်။ , LTD မှ။ အများပြည်သူအဆောက်အဦးများ၏လျှပ်စစ်ဓာတ်အားစနစ်ကစီမံခန့်ခွဲတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ 20000 စတုရန်းမီတာတစ်သိပ္ပံဆိုင်ရာသုတေသနအခြေစိုက်စခန်းရှိပါတယ်။ ဒါဟာ R & D zhuhai အဆင့်မြင့်နည်းပညာဇုန်အတွင်းရှိစင်တာများနှင့် Shenzhen Nanshan သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာပန်းခြံ, ဘေဂျင်း, ရှန်ဟိုင်းနှင့် Shenzhen အတွက်အကိုင်းအခက်နှင့်တရုတ်နိုင်ငံထဲမှာ 20 ကျော်ရုံးများရှိပါတယ်။ ငါးအင်ဂျင်နီယာအကောင်အထည်ဖော်မှုနှင့်နည်းပညာဝန်ဆောင်မှုစင်တာများမြောက်ဘက်တရုတ်မှာ set up ပြီ, အရှေ့တရုတ်, တောင်ဘက်တရုတ်, အနောက်မြောက်ဘက်တရုတ်နှင့်တရုတ်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းနှင့်ရင့်ကျက်ခြင်းနှင့်ပြီးပြည့်စုံသောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်အင်ဂျင်နီယာအကောင်အထည်ဖော်မှုကွန်ယက်ကိုထူထောင်ထားပြီး
Ningbo ကုန်ထုတ်လုပ်မှုပူးတွဲ aimei-dongxiong ။ , LTD
လူအပေါင်းတို့အားလူသိများသည်နှင့်အမျှ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်မော်တာကာကွယ်မှုများအတွက်ဝယ်လိုအားအတော်လေးရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့အနေနဲ့အကျိုးရှိကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းတွေ့ပါနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများကောင်းတစ်ဦးအမှတ်တံဆိပ်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေရန်လိုအပ်သည်။ သာအနိုင်ရ - အနိုင်ရရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆက်ဆံရေးဟာရှည်လျားစေနိုငျပါသညျ! ငါသညျလညျးသငျသညျအကောင်းတစ်ဦးပေးသွင်း, ကောင်းတစ်ဦးမိတ်ဖက်ကိုရှာဖွေဆန္ဒရှိ!
Ningbo aimei-dongxiong ကုန်ထုတ်လုပ်မှု co ။ , LTD မှ။ - ဘုတ်အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ - Huang Guo-Sheng - မွငျ့မားကြိမ်နှုန်းမြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းမြင့်မားအကြိမ်ရေစက်ပစ္စည်းများ၏ဒီဇိုင်းနှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းအထူးပြု
Ningbo aimei-dongxiong ကုန်ထုတ်လုပ်မှု co ။ , LTD မှ။ မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းပလပ်စတစ်ဂဟေဆော်စက်, ultrasonic ပလပ်စတစ်ဂဟေဆော်စက်နှင့်ဖြတ်တောက်ခြင်းစက် "အမှတ်တံဆိပ် dongxiong" ၏တဲ့ professional ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ဖောက်သည်ရဲ့လိုအပ်ချက်အရသိရသည်အလိုအလျောက်ကိရိယာများနှင့် Non-စံစက်ပစ္စည်းကိရိယာများကိုစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်။
တရုတ် huayi ဓာတ်ငွေ့ပူးတွဲ။ , LTD
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ, ပြည်နယ်ဇယားကွက်များ၏ဈေးကွက်ကိုဖုံးအုပ်ထား, ဖေဖော်ဝါရီ 2007 ခုနှစ်ကငါးပါဝါမျိုးဆက်အုပ်စုများ, ရေနံ, ဓာတုစက်မှုလုပ်ငန်း, ရထားလမ်း, စက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစာရင်းခဲ့သည်။ ရုံနှစ်ခုသို့မဟုတ်သုံးခုနှစ်များတွင် feinald ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီ၏အရေးပါသောဖက်ဖြစ်လာသည်။ feynard ငါ၏စှဲအဆိုပါအရောင်းစာရေးလူနာဖြစ်ပါသည်, ပေးပို့အချိန်မီဖြစ်ပါသည်, နှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ feynard ရဲ့ core အရည်အချင်းကိုနဲ့တူရဲ့: ကဝန်ဆောင်မှုအကြောင်းကိုပါပဲ။ ငါသူတို့တိုင်းလမ်းအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်စေနိုင်ပါတယ်ယုံကြည်ပါတယ်နှင့် feynard တစ်ဦးကိုခံထိုက်သောမိတ်ဖက်ဖြစ်ပါတယ်။
Zheng xiaohua, တရုတ် huayi ဓာတ်ငွေ့တွဲဖက်ဒါရိုက်တာ။ , LTD မှ
Huayi ဓာတ်ငွေ့ co ။ , LTD မှ။ (လျှော့ "huayi ဓါတ်ငွေ့" အဖြစ်ရည်ညွှန်း) huayi လျှပ်စစ်အုပ်စုကိုပူးတွဲတစ်ဦး core ကိုကိုင်ပြီးလက်အောက်ခံဖြစ်ပါတယ်။ , LTD ။ leqing မွို့တှငျ, မြို့, Zhejiang ပြည်နယ် wenzhou ။ အဘယ်သူမျှမတရုတ်များ၏အာမခံစည်းမျဉ်းကော်မရှင် (CSRC) ကအတည်ပြုခဲ့သည်။  မပါ။ 286, က 600290 ရဲ့စတော့ရှယ်ယာကုဒ်နှင့်အတူဖေဖော်ဝါရီ 1, 2007 ရက်တွင်ရှန်ဟိုင်းစတော့အိတ်ချိန်းအပေါ် re-စာရင်းဝင်ခဲ့သည်
အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု (ရှန်ဟိုင်း) ကိုပူးတွဲ Danfoss ။ , LTD
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီအအေးနှင့်လေအေးပေးစက်ထိန်းချုပ်မှုဖြေရှင်းချက်ထဲမှာပါဝင်နေသည်။ စီးပွားရေးရှုထောင့်ကနေ, ငါတို့သည်လည်းတစ်ဦးပေးသွင်းဖြစ်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏မစ်ရှင်ဖောက်သည်ကိုပိုမိုယှဉ်ပြိုင်စေရန်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အရည်အသွေးနှင့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောစျေးနှုန်း၏ထုတ်ကုန်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများတိုးတက်စေရန်ကြိုးစားအားထုတ်ပါစေရန်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအ feynard ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေးအခေါ်နဲ့အညီဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီအဓိကအား 18.5kw-110kw ၏မော်တာကိုအသုံးပြုသည်ကို၎င်း, အရောင်းနှင့် feinade ၏နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအသင်းကိုမကြာခဏအတူတကွအချို့သောပစ္စည်းကရိယာပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်, ငါတို့အချို့လက်တွေ့ကျတဲ့အကြံပြုချက်ပေးခြင်းဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီ, ငါတို့နှင့်အတူအချို့သောနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာဆက်သွယ်ရေးအောင်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီသွားရောက်ကြည့်ရှု။ တစ်ဦးကယ့်ကိုအကောင်းကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းထုတ်ကုန်ရောင်းချပေမယ့်ဖောက်သည်ရန်စိတ်အားထက်သန်သည်, ဖောက်သည်များလိုချင်တာတွေထင်, ထိုပြဿနာကိုစဉ်းစားရန်ဖောက်သည်ရဲ့အနေအထားအတွက်မခံမရပ်သာ!
အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု (ရှန်ဟိုင်း) ကိုပူးတွဲ Danfoss ။ , LTD ။ - sunbin
Danfoss (Danfoss) 1933 Danfoss ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, ဒိန်းမတ်တွင်အကြီးဆုံးနိုင်ငံစုံစက်မှုကုန်ထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်အဆင့်မြင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာများ၏အသုံးပြုမှုကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်စွမ်းအင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိုအာရုံစိုက်ဘို့လူသိများသည်။ Danfoss အအေးနှင့်လေအေးပေးစက်ထိန်းချုပ်မှု, အပူနှင့်ရေထိန်းချုပ်မှုနှင့်ဂီယာထိန်းချုပ်မှု၏လောကဓာတ်ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူများနှင့် service provider ကဖြစ်ပါတယ်။